Abantu bacabangani nge-cellulite? Ingabe bacabanga ngaye? Noma ingabe bayayikhumbula kuphela lapho bebona lokhu "okuluhlaza okwesibhakabhaka" okuvelele ezinyaweni zomfazi wabo othandekayo? Futhi ingabe usalandela lokho okuthandayo? Le mibuzo neminye mayelana ne-cellulitis inqotshwe ezinhlokweni eziningi zabesifazane, okuzungezwe ngokuziqhenya, ukuqagela kanye nezinganekwane. Abesifazane bayazi ukuthi bangaziphilisa, baqede impi yangaphakathi nezinkimbinkimbi, banqobe, balahlekelwe, futhi amadoda angase angalokothi asole ukuthi asempi. Kodwa mhlawumbe okuphambene kuyiqiniso. Ngokuvamile, amadoda anamuhla anesigqoko kakhulu ezindinganisweni zobuhle, futhi athi ngokucacile ukuthi ikhasi le-orange liyi-citrus, futhi isikhumba emilenzeni yamantombazane nasemadodeni kufanele kube ngisho nokunwebeka. Abalobi bezincwadi ezithandwayo abaqhutshwa ucwaningo, ngemva kokufunda umbono wesilisa mayelana ne-cellulite. Imiphumela yakhe iyamangalisa, futhi yenza bakucabange.
Izibalo zamadoda mayelana nesimo se-cellulite yesifazane
Cishe wonke amadoda ayazi ukuthi i-"orange" i-defect isikhumba ibizwa ngokuthi i-cellulite. Kodwa bamphatha kanjani? Ukufuna impendulo yalo mbuzo kwakuyinhloso yocwaningo, olwenziwa phakathi kwamadoda aneminyaka eyi-18 kuya kweyengu-60. Imiphumela yalo emibhalweni yephesenti ibonakala kanje:
Amadoda angu-47% awazange aqaphele inkinga ye-cellulite kubesifazane bawo noma awaboni njengabalulekile aze abakhanyise.
Amadoda angu-24% akhetha abanikazi bomzimba omuhle, kepha kubo, cellulite ngokwawo akubalulekile, kodwa kunzima noma kuncane.
Amadoda angu-15% ahlola abesifazane ngokubonakala kwawo jikelele, futhi uma owesifazane ebathanda, khona-ke ukuba khona kwakhe kwe-cellulite akubalulekile.
Amaphesenti angu-10 acabangela ukuthi i-cellulite yinto engabonakali ngabesifazane, okuyinto lapho kukhethwa owesifazane kungaba ingxabano eqinile.
Amaphesenti angu-4 awazi kahle nge-cellulite yesifazane futhi anganquma ukuthi kukhona khona kanye nezigaba zokubonakaliswa.
Izibalo ezingenhla zibukeka sengathi zithemba, okungeke kwenzeke kodwa zijabule ukuziqhenya kwabafazi. Nakuba kunjalo, kunamadoda angafuni ukuthethelela abamele ingxenye enhle yesintu se-cellulite futhi bacabange ukuthi ukuchitha umzimba wesifazane. Kodwa ingabe abantu ngokwabo bayazi ukuthi isikhumba sabo futhi asikhunjulwa "kwi-orange crust"? Ukubonakala kwakhe kubangelwa i-hormone yesine estrogen, futhi uma ikhulu kakhulu emzimbeni wesilisa, i-cellulite ngeke icele ubulili, futhi "ihle" umzimba womuntu onama-tubercles angama-subcutaneous fatty.
Abantu bacabangani nge-cellulite yabesifazane?
Izibalo izibalo, kodwa zomile futhi ezingenasici, kodwa ngingathanda ukuzwa ukusabela okuphilayo kwamadoda ku-cellulite. U-Alexander, 38, umshayeli "Ngiyayithanda i-cellulite kwabesifazane, isandla asiyifuni papa! Ngubani othi cellulite kubi? Amabhasi ayinayo i-cellulite, kodwa ayengayithandi. Owesifazane kufanele abe mnene, epholile, efudumele. Lokhu kungenziwa "kugwetshwe" kuphela kwabesifazane abanamafomu, futhi lapho kukhona khona amafomu, kunamafutha angaphansi kwesikhumba. Angidingi amathambo ahlanganiswe isikhumba esisodwa! " UGeorge, oneminyaka engu-26 ubudala, umphathi wezokuthengisa " Ngiyamthanda abesifazane, kodwa angithandi emizimbeni yabo lokhu okukhululekile okungcolile kwamafutha, okuwaziwa yiwo wonke njenge-cellulite. Awunakuphuthelwa! Ingabe lowo wesifazane uzobe esezinqeni zobuningi. Kodwa ayikho inkinga kulokhu uma intombazane izithanda ngokwanele ukushayela i-cellulite ejimini. "
UPeter, 47, umakhi "Ngikwazi ukuthi i-cellulite ibukeka kanjani? Ngiyazi. Umkami zonke izindlebe zithukile, zithukuthele ukuthi uzuze kumama wakhe. Ngimphatha kanjani? Yebo, ngokuyisisekelo, evamile. Kungakhathaliseki ukuthi ngiyayibona noma cha kuxhomeke ekukhanyeni kokukhanya noma utshwala engiphuzile. Futhi uma owesifazane kimi okuthile kuzokukhunjulwa, kusobala ukuthi akusilo i-cellulite. Ngisho noma ngikubona, ngeke kuphazamise amandla ami nganoma iyiphi indlela! "U- Igor, oneminyaka engu-33, wamazinyo " I-cellulite yesifazane yinto engokwemvelo. Ukulwa nalo akusizi ngalutho. Kufanele nje uyamukele. Yiqiniso, ukubona "imilenze ye-orange", ehambahamba emigwaqweni yedolobha emikhankathini encane, akuwona umbono omuhle kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu, iningi labesifazane bahlakaniphile ngokwanele ukuba bangalitholi ukubonisa. Okunye akungikhathazi. Umkami une-cellulite, kodwa unesifuba esihle kakhulu, futhi inhlamba enhle, kodwa okubaluleke kakhulu - unenhloko emahlombe akhe. Ngalokho ngimthanda! "
URichard, oneminyaka engu-28 ubudala, u-stylist "Angizange ngizwe kubantu besithukuthele kakhulu nge-cellulite yabesifazane. Omunye naye uyamthanda. Ngomuntu, angikuqapheli uma owesifazane ekwazi ukufihla ukungaphumeleli komzimba wakhe futhi agcizelele isithunzi ngosizo lwezingubo. Ngiyanxusa bonke abesifazane ukuba bagcizelele ukusika okhethekile kwezingubo, indwangu, izesekeli kulawo malungu omzimba abo abaziqhenyayo. Futhi amadoda ahlambalaza imilenze kanye nembongolo enezimpawu ze cellulite, bypass. Uma bengayithandi umzimba wakho, ngeke neze bakuthande ! U- Alexey, isazi sezinto eziphilayo, oneminyaka engu-45 ubudala. "Ngiyakuthanda abesifazane abangenqikazi ngomzimba wabo futhi" bagqoke "ngokuziqhenya, ngisho noma kungeyona inhle yobuhle. Futhi-ke akunandaba ukuthi une cellulite, noma cha. Ngami, uyindlovukazi enhle. Ngake ngilizwa ukuthi omunye umuntu onjalo onamahloni okukhuluma ngokungathandeki kumafomu awo "orange" wathi: "Angikhathaleli nge-cellulite yami, ngoba umagazini engangifisa ukuphrinta isithombe sami akuyona i-Playboy, kodwa i-Forbes!" ngothando! "
Yini amadoda adumile acabanga nge-cellulite?
UDmitry Tarasov, umdlali webhola lezinyawo "Angikukhathaleli amantombazane angakwazi ukuzibuka wona kanye nemfashini. Ngithanda amantombazane nge jeans eziqinile, ubuso bezinwele, ubuso obulungiswe kahle nezandla. Lokhu kubalulekile. Anginakho okumelene nabesifazane abancane abahle, kodwa ubuthakathaka bami buncane nemilenze emincane. Nakuba lokhu akusho ukuthi uma ngithanda owesifazane uzoba ne-cellulite, ngakho-ke akanalo ithuba. " U-Ivan Dorn, umculi "Abesifazane, njengombuso, banginqobe ngokuhlakanipha. Ukubukeka - indaba yesibili, nakuba kungabalulekile. Ngikholelwa ukuthi inkinga ye-cellulite ihlonywe ngumagazini abashisa imfashini kanye nokukhangisa. Ixoshwa ngokweqile. Mina, njengamadoda avamile, qaphela ukutholakala kwe-cellulite ekugcineni. Into eyinhloko ukuthi owesifazane kufanele abe ehlelekile futhi ehlelekile. " U-Ivan Nikolayev, umlingisi "Yiqiniso, mina nginezinhloso zobuhle, kodwa angikwazi ukuthi ngisebenzisa amazinga athile kumuntu wesifazane. Ngami, kubalulekile ukuthi kukhona ukulingana emzimbeni nasebuntwini kumlingiswa. Intombazane kufanele ibe nenhle yangaphakathi. Uma ezithakazelisayo kimi njengomuntu, akunakwenzeka ukuthi ngizovinjelwa uhlobo oluthile lwe-cellulite lapho. "
Amagama amantombazane ekhalendeni lesonto
Isoka lakho alizange likhohlwe okwangaphambili: yini okufanele uyenze?
Indlela yokubala ukuhambisana kokubili ngosuku lokuzalwa
Iphazili yokucabanga okungavamile, ixazululwa ngumuntu oyedwa kuphela ngonyaka ka-1000. Futhi ungakwenza?
I-Mango jelly nelayisi
Inyama encane ngamakhowe kuhhavini
Ubuhlobo obuhle emndenini omusha
Indlela yokufundisa ingane ukuhlanza izinto zakhe?
U-rainbow weSicilian: iqoqo le-makeup Ihlobo e-Italy 2016 kusuka ku-Dolce & Gabbana
Ama-Makeup for amehlo amancane
U-Polina Gagarina ulindele ingane yesibili, isithombe
U-Ivan Urgant washada nomfazi womphakathi